के सम्बन्ध राम्रो बनाउन सेक्स आवश्यक छ ? - samayapost.com
के सम्बन्ध राम्रो बनाउन सेक्स आवश्यक छ ?
समयपोष्ट २०७७ साउन १३ गते २१:२४
यौन सम्बन्धले दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । कयौ जोडीबीच यौनसम्पर्कका लागि अनुकुलता नहुँदा सम्बन्ध टुट्ने पनि गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गर्दछन् । यहाँ दुई पाटर्नरका बीच सेक्सका लागि कति अनुकुलता मिलिरहेको छ यसबारेमा थाहा पाउने केही संकेतहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सेक्स दुवै पाटर्नरबीचको खुशी तथा सन्तुष्टिका लागि गरिने कोशिस हो । सेक्सका दौरानमा एकजना क्लाइमेक्समा पुग्ने र अर्को शिथिल भइसक्ने अवस्था कहिल्यै पनि आउन दिनुहुन्न यसका लागि दुवै पार्टनर यौनसम्बन्धमा बराबर तृप्त हुन जरुरी छ ।
सेक्समा कामइच्छाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । के तपाई दुवै पाटर्नरको सेक्स ड्राइभ अलग अलग छ ? दुवैजना मध्ये एकजना बढी क्रियाशिल हुने र अर्को जना कम क्रियाशिल हुने समस्या छ भने यसको असर सोचमा पनि पर्ने गर्दछ जसले दैनिकी र पूरा जीवनमा नकारात्मक असर पर्न पनि सक्दछ ।